Adeegga ugu fiican ee Lumenis M22 iyo Alaab -qeybiye | Hongyu
M22, Platform Platform-ka Codsiyada Badan ee Quruxda Laydhka ah
M22 ™ waa madal codsiyo badan leh oo lagu daweeyo in ka badan 30 xaaladood oo maqaarka ah iyo timaha ka saarista.
Waxaa adeegsada dhakhaatiirta adduunka oo dhan, M22 ™ waxay awood kuu siineysaa inaad daaweyso bukaanno kala duwan iyo xaalado leh natiijooyin aad u wanaagsan.
4 Farsamooyin fara badan oo ku jira Hal Nidaam Module
M22 ™ wuxuu ku koraa tababarkaaga
Wuxuu ku fidaa baahiyaha daaweyntaada wuxuuna la qabsadaa codsiyada mustaqbalka markay soo baxaan.
Farsamada Garaaca Ugu Fiican (OPT ™)
Gacan -gacmeed keli ah oo leh shaandheeyaal la beddeli karo iyo hagaha iftiinka
Daaweynta maqaarka IPL iyadoo la isticmaalayo sawir -qaadis
Qaybta kaliya ee runta ah ee aan ka-soo-horjeedin, oo leh CoolScan ™ scanner
Wixii dib -u -kicinta maqaarka
Nooca ugu sarreeya ee M22 oo leh AOPT ayaa hadda laga heli karaa Shiinaha!
M22 ™ Universal IPL hadda waxay la socotaa AOPT, oo awood u siineysa inay si buuxda u maamusho isticmaaleyaasha horumarsan, taasoo ka dhigaysa mid fudud in si gaar ah loo habeeyo goobaha bukaan kasta iyo xaalad kasta. Ka faa'iideyso garaaca garaaca kasta oo si sahlan u siiya bukaan socodkaaga natiijooyin caafimaad oo joogto ah oo adag!
Iyada oo leh naqshadda khadka dahabiga ah, Lumenis wuxuu si sharaf leh u soo bandhigayaa nooc M22 ah oo qaali ah, oo leh hufnaan, badbaado leh, iyo daaweyn ku saleysan wax ku ool ah & laser ku saleysan suuqa caafimaadka bilicda leh.
M22, Module -ka IPL -ga ee Caalamiga ahi wuxuu awood kuu siinayaa inaad ku daaweyso xaalado aad u tiro badan oo leh hal gacmo -gacmeed.
Gacan-gacmeedka IPL-ga Universal waxaa loogu talagalay 9 ExpertFilters ™ oo loo habeeyay xaaladda la daaweynayo iyo aqoonsiga shaandhaynta ee kombiyuutarku leeyahay si loo xoojiyo ammaanka iyo fududeynta isticmaalka. Iyada oo la adeegsanayo Universal IPL handpiece ExpertFilters ™ ilbidhiqsiyo halkii lagu xiri lahaa gacmo -gacmeed cusub oo dhan.
Gacan -gacmeedka IPL -ga Universal wuxuu keydiyaa waqti daaweyn oo keliya iyo meel wax lagu kaydiyo, laakiin sidoo kale waa mid aad u kharash badan maxaa yeelay looma baahna in la iibsado gacmo -gacmeedyo badan oo IPL ah. Sadex SapphireCool ™, oo loogu talagalay aagagga waaweyn iyo kuwa yaryar, waxay sare u qaadaan raaxada bukaanka iyadoo leh qaboojin xiriir joogto ah.
Nd: YAG Laser oo leh Teknolojiyad soo jiidasho badan oo isku xigxig badan
Qaybta Nd: YAG ee M22 ™ waxay bixisaa daawaynta telangiectasias, hemangiomas, xididada lugaha iyo laalaabkii wajiga. Daaweyn sax ah oo raaxo leh oo leh 4 laydh la qaboojiyey oo si fudud loo beddelay. Soo -jiidashada Isku -Darka Badan, oo laga heli karo labada qaybood ee Nd: YAG iyo IPL ee M22 ™, waxay awood u siisaa qaboojinta inta u dhaxaysa isku xigxiga, si loo ilaaliyo epidermis -ka iyada oo loo oggolaanayo adeegsiga nabdoon ee dareeraha sare. Tani waxay awood u siineysaa daaweynta dhammaan noocyada maqaarka, oo ay ku jiraan maqaarka madow, waxayna yareyneysaa fursadda waxyeellooyinka aan la rabin ee daaweynta dhaawacyada xididdada dhiigga.
Tamarta khafiifka ah ayaa la bixiyaa inta lagu jiro uurka, oo nudaha ayaa qaboojiya inta lagu jiro daahitaannada. Tamar badan ayaa si ammaan ah loo geeyaa bartilmaameedka.
Waxa ay Qabato
Iskudhufasho badan oo isdaba-joog ah ayaa u oggolaanaysa qaboojinta inta u dhexeysa si ay si ammaan ah uga saarto timaha dhammaan noocyada maqaarka oo ay ku jiraan maqaarka madow waxayna yareyneysaa fursadda dhaawaca maqaarka ee daaweynta dhaawacyada xididada.
ResurFX ™ Module-ka ResurFX of ee M22 ™ waa tiknoolajiyadda kaliya ee jajabka ah ee aan ablative ahayn. Hal baas waa wax walba oo ay qaadato.
Si ka duwan farsamooyinka kale ee jajabka ah, ResurFX ™ waxay u baahan tahay hal baas oo keliya si ay u noqoto mid wax ku ool ah, oo kuu badbaadisa waqti iyo ilaalinta maqaarka bukaanka.
ResurFX ™ wuxuu adeegsadaa laser fiber 1565 nm iyo iskaan aad u horumarsan, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ka doorato in ka badan 600 isku -darka qaab, cabbir iyo cufnaanta daaweynta ugu habboon.
ResurFX ™ Oo leh CoolScan ™ Daawaynta Ugu Fiican
Module-ka ResurFX has wuxuu leeyahay iskaanka casriga ah ee CoolScan for ee iskaanka aan isku xigxiga ahayn. Patent -ka sugaya algorithm -ku wuxuu meel kasta oo jajab ah u dhigayaa hab la koontaroolay si uu nudaha uga ilaaliyo kulayl urursiga iyo kulaylka. Awooddani waxay gaar u tahay ResurFX ™ 1565nm laser fiber. Gacan -gacmeedka ResurFX is wuxuu ku qalabaysan yahay qaboojin xiriir joogto ah, si loo kordhiyo raaxada bukaanka inta lagu jiro daaweynta.
Hore: HydraFacial MD